AdEx စျေး - အွန်လိုင်း ADX ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို AdEx (ADX)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ AdEx (ADX) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ AdEx ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $7 986 933.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ AdEx တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
AdEx များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
AdExADX သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.225AdExADX သို့ ယူရိုEUR€0.191AdExADX သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.173AdExADX သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.206AdExADX သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr2.04AdExADX သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.1.43AdExADX သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč5.03AdExADX သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.843AdExADX သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.302AdExADX သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.315AdExADX သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$5.05AdExADX သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$1.75AdExADX သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$1.23AdExADX သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹16.9AdExADX သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.38.08AdExADX သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.31AdExADX သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.341AdExADX သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿7.04AdExADX သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥1.57AdExADX သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥23.89AdExADX သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩268.13AdExADX သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦87.23AdExADX သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽16.62AdExADX သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴6.25
AdExADX သို့ BitcoinBTC0.00002 AdExADX သို့ EthereumETH0.000579 AdExADX သို့ LitecoinLTC0.00396 AdExADX သို့ DigitalCashDASH0.00232 AdExADX သို့ MoneroXMR0.00243 AdExADX သို့ NxtNXT16.41 AdExADX သို့ Ethereum ClassicETC0.0326 AdExADX သို့ DogecoinDOGE64.55 AdExADX သို့ ZCashZEC0.00246 AdExADX သို့ BitsharesBTS8.65 AdExADX သို့ DigiByteDGB7.68 AdExADX သို့ RippleXRP0.782 AdExADX သို့ BitcoinDarkBTCD0.00771 AdExADX သို့ PeerCoinPPC0.751 AdExADX သို့ CraigsCoinCRAIG101.94 AdExADX သို့ BitstakeXBS9.54 AdExADX သို့ PayCoinXPY3.91 AdExADX သို့ ProsperCoinPRC28.07 AdExADX သို့ YbCoinYBC0.00012 AdExADX သို့ DarkKushDANK71.73 AdExADX သို့ GiveCoinGIVE484.23 AdExADX သို့ KoboCoinKOBO50.53 AdExADX သို့ DarkTokenDT0.208 AdExADX သို့ CETUS CoinCETI645.65